Hindise Sharciyeedka Hanti -dhowrka ee Nigeria ma khiyaamo baa? Helitaanka Xaqiiqda - Wareegga Maalka
Bogga ugu weyn Hindise Sharciyeedka Hanti -dhowrka ee Nigeria ma khiyaamo baa? Helitaanka Xaqiiqda
Muxuu Yahay Sharciga Maaliyadda ee Nigeria?
Sidee Biilasha Maaliyaddu uga shaqeeyaan Nigeria?
Waa maxay Faa'iidooyinka Maalgelinta Biilka Maaliyadda ee Nigeria?
Shakhsiyaadku ma ka iibsan karaan biilasha khasnadda Nigeria?
Waa maxay Qadarka ugu Yar ee Biilka Maaliyadda Nigeria?
Sida Loo Iibsado Biilasha Khasnadda ee Nigeria
Waa Maxay Heerka Hadda ee Sharciga Maaliyadda ee Nigeria?
Sidee Loo Xisaabiyaa Xiisadaha Lacagta Maaliyadeed ee Nigeria?
Sharciga Khasnadda ma la joojin karaa ka hor inta uusan qaangaarin Nigeria?
Biilka Maaliyaddu Ma yahay Maalgelin Wanaagsan?
Maalgelinta biilasha khasnadda ee Nigeria waa bilaash. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira baahi loo qabo in la barto sida uu u shaqeeyo qorshaha maalgashigu.
Sida laga soo xigtay Nairametics, Biilasha Khasnadda waa qalab deyn oo ay dawladdu dammaanad ka qaadday CBN oo wakiil ka ah si ay u maalgeliso kharashaadka. CBN -ku wuxuu kaloo isticmaalaa biilasha khasnadda si loo xakameeyo bixinta lacagta ee dhaqaalaha.
Ma jeclaan lahayd inaad lacag meel iska dhigto oo aad kasbato dulsaar macno leh dhawr toddobaad ama bilo uun? Ka fikir inaad iibsato biilasha khasnadda.
Dhowr sadar oo soo socda, waxaan ku qeexi doonaa waxa uu yahay biilka khasnaddu, waxa uu ka kooban yahay, faa'iidooyinka, iyo hannaanka tallaabo-tallaabo ee sida uu u shaqeeyo. Si taxaddar leh u akhri.
Nairometrics wuxuu ku qeexayaa biilasha khasnadda inay tahay aalad deyn oo ay dawladdu dammaanad ka qaadday CBN oo wakiil ka ah si ay u maalgeliso kharashaadka. CBN -ku wuxuu kaloo isticmaalaa biilasha khasnadda si loo xakameeyo bixinta lacagta ee dhaqaalaha.
Biilashaani waa dammaanadaha suuqa lacagta ugu dareeraha badan waxaana taageeraya ansixinta Dowladda Federaalka ee ummad. Dowladda Federaalka ee Nigeria, iyada oo loo marayo Bangiga Dhexe ee Nigeria, waxay soo saartaa Biilasha Maaliyadda Nigeria si ay u bixiso maalgelin waqti-gaaban ah oo ku saabsan yaraanta miisaaniyadda dowladda.
Dhammaan biilasha khasnadda waa maalgelin muddo gaaban ah waxayna bislaadaan sannad gudaheed laga bilaabo taariikhda la soo saaray. Waxaad haysataa ikhtiyaar inaad ku iibsato biilasha leh muddooyin qaan -gaar ah oo ah bil, lix bilood ama hal sano. Guud ahaan, muddada baaluqnimada oo dheeraata, ayaa lacag badan oo aad ka samayn doontaa maalgashigaaga.
Biilasha khasnadda waxay leeyihiin qiime weji oo xaddi go'an ah, taas oo ah waxa ay dhab ahaan u qalmaan. Laakiin wax yar baa lagu iibiyaa. Tusaale ahaan, biilku wuxuu noqon karaa mid qiimo leh ₦100,000, laakiin waad ku iibsan lahayd ₦90,000 oo leh 10% dulsaarka dulsaarka hore loo bixiyay.
Marka biilku bislaado oo caadiyan dhaca wakhti ka dib, dawladdu waxay dib kuugu soo celinaysaa lacagtii aad maalgashatay oo dhan taas oo ah ₦100,000 oo aad kasbato ₦10,000 ka ₦100,000 oo maalgashi.
Qaddarka aad kasbato waxaa loo tixgeliyaa dulsaar. Markaan ku sii soconno maqaalkan, waxaan ku tusi doonaa sida loo xisaabiyo dulsaarka.
Biilasha maaliyaddu waa mid ka mid ah qaababka ugu nabdoon ee maalgashiga adduunka maxaa yeelay waxaa taageera dowladda qaranka.
Biilasha khasnadda ayaa ka mid ah maalgashiga ugu nabdoon gudaha Nigeria maadaama ay iimaan buuxa iyo sumcad ku leedahay Dowladda Federaalka ee Nigeria. Waan hubaa inaad garanayso waxa ay ka dhigan tahay.
Waa tan liiska faa'iidooyinka ku lifaaqan maalgelinta Biilasha Khasnadda ee Nigeria:
Maalgelinta Khasnadda BIlls waxay bixisaa ilo dakhli oo wanaagsan.
Biilasha Maaliyaddu waa maalgashi aan khatar lahayn oo loogu talagalay dadka raba inay kaydsadaan.
Biilasha Khasnadda waa kuwo aad u dareere ah waxaana si dhaqso ah loogu beddeli karaa lacag caddaan ah.
Waxaa loo isticmaali karaa dammiin ahaan.
Wax -soo -saarka ama Dakhliga ku jira maal -gashiga ayaa ah mid aad u tartamaya marka la soo celiyo aaladaha kale ee suuqa lacagta ee qaangaarka la midka ah.
Damaanad-qaadyadu waxay leeyihiin halis eber ah.
Sharciga Hantidhowrka waxaa lagu kala iibsan karaa sarrifka saamiyada.
Dabcan haa!! Xubin kasta oo ka mid ah dadweynaha ayaa maalgashan kara biilasha Maaliyadda Nigeria; shakhsiyaadka, Hay'adaha Shirkadaha (Gaarka ah iyo kuwa Dadweynaha), Hay'adaha (Gaarka ah iyo kuwa Dadweynaha), Bangiyada, Guryaha Dhimista, iyo Dallaaliinta ayaan laga dhaafin.
Maalgelinta biilasha khasnadda waxaa lagu xaraashayaa Diiwaangelinta suuqa ee 91,182, 365, iyo 730 maalmood.
Biilasha Khasnadda waxaa lagu iibiyaa xaraash laba toddobaadle ah oo ay qabato CBN. Iibsadayaasha waxaa laga codsanayaa inay soo xigtaan dalabyada soo socda kaas oo la doorto celceliska ugu yar.
Qadarka ugu yar ee maalgashiga sida uu qabo bangiga dhexe ee Nigeria waa 50 milyan oo naira - waxaana inta badan la xaraashaa toddobaad kasta. Si kastaba ha ahaatee, bangiyada qaar ee sida tooska ah wax uga iibsada CBN waxay xaq u leeyihiin inay qiimo tafaariiq ah ku iibiyaan maalgashadayaasha tafaariiqda ah ee aan haysan ilaa 50 milyan oo naira oo ay ku maalgashadaan.
Tiro wanaagsan oo ka mid ah hay'adaha maaliyadeed iyo kuwa saamileyda ah ee toos uga iibsada CBN peg -ga ugu yar ee ₦50,000, ₦100,000, iyo ilaa 1 milyan oo naira. Waxaa jira khidmado loogu talagalay adeegyadooda kuwaas oo ku kala duwan sida ay tahay hay'adda maaliyadeed.
Si aad u iibsato Biilasha Khasnadda waa inaad la xiriirtaa bangigaaga oo codsanaya foom. Waxaad buuxineysaa foomka macluumaadkaaga shaqsiyeed sidoo kale waxay muujineysaa xaddiga aad rabto inaad iibsato sidoo kale wuxuu leeyahay heerka dalabkaaga.
Markii ay soo ifbaxeen baanannada biilasha arjiga moobiilka, waxaa lagaa rabaa oo keliya inaad buuxiso foomka diiwaangelinta hal mar.
Waxaad sidoo kale ka iibsan kartaa biilasha khasnadda Nigeria adiga oo adeegsanaya onlayn kaydka madal. Tan waxaa lagu samayn karaa khadka tooska ah ee gurigaaga/xafiiskaaga. Si kastaba ha noqotee, inta badan shirkadaha saamiyada leh waxay oggol yihiin ugu yaraan maalgashi N100, 000.
ARAG SIDOO KALE: Waxa Lagu Sameeyo 100k Nigeria | Fikradaha Ganacsi ee Ugu Fiican
Sida ku cad xogtii ugu dambeysay ee laga businessinnigeria.com, hoosta waxaa ku yaal wax -soo -saarka biilasha khasnadda iyo kirayntooda. Fadlan ogow in tani aysan tilmaameynin sicirrada mustaqbalka (qiimayaasha ayaa hoos u dhici kara ama ka sarreeya iyadoo lagu saleynayo baahida iyo bixinta).
karnay Soo -saar (%) pa
Muddo gaaban 0.34
Haddii aad iibsato a ₦100,000 Qaaxada oo leh dulsaar 10%ah, CBN ayaa koontadaada ku shubaysa N90,000 maadaama sidaas oo kale N10,000 dulsaarkaaga hore loo bixiyo. Markaad weynaato, waxaa lagu siinayaa qiimaha wajiga ₦100,000. Bixinta hore ee dulsaarkaaga ayaa ka dhigaysa dhaliddaada dhabta ah mid aad u sarreysa.
Si loo xisaabiyo lacag bixinta hore: Dulsaarka (I) = P x T x R / 100
P = Maamule
T = Waqtiga/Muddada
R = Qiimee
Taasi waa 100,000 x 1 x 10/100 = 10, 000. Tani waa waxa aad heshid bilowga maalgashiga halka N90,000 loo diro CBN.
Iyada oo 10,000 hore loo sii bixiyay, waxay ka dhigan tahay inaad maalgelinayso 90,000 farsamo ahaan oo aadan ahayn 100,000 tan iyo markii 10% dulsaarkii mar horeba la soo diray.
Si loo xisaabiyo dhaliddaada dhabta ah markaa: R = I x 100/P x T
10,000 x 100/ (100, 000 x 1) = 10% waa dhalidda dhabta ah ee maalgashiga.
Haddii aad rabto inaad ku joojiso qaan -gaadhnimada waxaad sidoo kale ku samayn kartaa bangiga ama guriga maalgashiga ee maalgelinta la dhigay. Maalgelinta ayaa sidoo kale la joojin karaa ka hor qaangaarka. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay ku xiran tahay lacag-bixin hore u-bixin ah taas oo saamaynaysa oo keliya bixinta dulsaarka. Hadda 20%.
Maalgashi aan khatar lahayn oo dulsaar leh hubaal waa maalgashi wanaagsan. Bangiga dhexe wuxuu bixiyaa biilasha T isagoo wakiil ka ah dowladda federaalka. Waxay la mid tahay sida dad badan oo dawladdu u buuxdo.
Halkan dawladdu waxay ka ururisaa “lacag” dadweynaha si ay u maalgeliso kharashkeeda.
Waa nabad-gelyo waqti-gaaban oo lagu soo saaray qiimo dhimis kireystaha oo u dhexeeya 91 ilaa 364 maalmood. Faa'iidada maalgashiga waxaa inta badan lagu bixiyaa bilawga wax kala iibsiga iyadoo loo eegayo heerka ribada halka lacagta buuxda la bixiyo marka ay qaan gaadho.
Isku soo wada duuboo, biilasha Maaliyaddu waa mid ka mid ah qaababka ugu nabdoon ee maalgashiga adduunka maxaa yeelay waxaa taageeray dowladda waxaana loo tixgeliyaa inaysan khatar ahayn.
Maxaa ka dhigaya maalgelinta biilasha khasnadda ee Nigeria marka laga reebo aaladaha kale ee maalgashiga iyo qorshayaasha ayaa dhaafsiisan heerka dulsaarka-xaqiiqnimada iyo dabeecadda aan khatarta lahayn waa boqor. Marka, haddii aad raadineyso maalgashi hubaal ah oo aad ku kaydsan karto, maalgelinta biilasha khasnadda ee Nigeria waa inay ku sarreysaa shaxdaada.
nairametrics.com -Biilasha Khasnadda Nigerian: Wax walba ka baro t-biilasha
naijabusiness.com.ng - Sida Loo Maalgeliyo Biilasha Khasnadda Nigeria, Xataa Raasamaal Yar
ganacsiganigeria.com.ng - Sida loo maalgaliyo biilasha khasnadda ee Nigeria
nigerianinfopedia.com.ng - Sida Loo Xisaabiyo Biilasha Khasnadda ee Nigeria
10 Kaydka Abaalmarinta Sare ee Khatarta Hoose| Maalgelinta Hantida
Lacag Bixin Si Aad Ugu Gudubto Gobol Kale: 10 Meelood Oo Ugu Fiican Oo Si Fiican U Bixiya 2022